–मिलन विक्रम सिंह बस्नेत
षडानन्द नगरपालिकास्थित अरुण उच्च मा.वि भोजपुरमै नाम चलेको विद्यालय हो । यस विद्यालयमा मैले कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन गरेको थिएँ । अरुण मा.विमा पढेको विद्यार्थी भन्न पाउँदा मलाई भित्रभित्रै गौरव महसुस हुने गर्दथ्यो किनभने शैक्षिक गुणस्तर अब्बल रहेको कारण जिल्लाभरी यस विद्यालयको बेग्लै सान थियो । तर, केहि वर्ष यता अरुण मा.विको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको थाहा पाएदेखि मलाई भित्रभित्रै ग्लानी महसुस भईरहेको छ ।
कुनै समय थियो, अरुण मा.विका विद्यार्थी एस.एल.सी (हालको एस.ई.ई) मा डिस्टिङ्सनसम्म ल्याउने गर्दथे । आजकल विद्यालयको नतीजा प्रतिशत देख्दा लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विद्यालयले एस.ई.ई तथा प्लस टुमा शुन्य नतीजा हात पा¥यो भनेको सुन्दा आफैँलाई विश्वास लाग्दैन । त्यति राम्रो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अचानक यति धेरै खस्कियो कसरी ?
मैले अरुण उच्च मा.विका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र पण्डितसँग फोन सम्पर्क गरेँ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निकै नै घटेको विषयलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले विद्यालयको प्रधानाध्यापक पद सम्हालेको चार वर्ष भएको रहेछ । यी चार वर्षमा उहाँ विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गर्न खासै सफल हुनसक्नु भएको रहेनछ । जिल्ला कै प्रख्यात विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउँदा जोकोही पनि खुसी नै हुन्छ र अभिभावकहरूको पनि चाहना यही नै हुन्छ । तर, यस्ता नाम चलेका विद्यालयको गुणस्तर दिनप्रतिदिन उकालो लाग्नुको सट्टा ओरालो लाग्दा कसको पो मन खुसी होला र !
वि.सं.२०२१ सालबाट अरुणले अध्यापन सुरु गरेको थियो । जिल्लामै आफ्नो स्थान उच्च बनाउन सकेको थियो । यसै सफलताबाट हौशिएर वि.सं.२०६५ सालबाट विद्यालयले उच्च मा.विको पढाई पनि सुरु गरेको थियो । अध्यापन सुरु गरेको पहिलो वर्ष मै विद्यालयले सर्वाेत्कृष्ट नतीजा ल्याउन सकेको थियो ।
वर्तमान प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र पण्डितले मा.विको शैक्षिक गुणस्तर घट्नुको मुख्यकारण शिक्षक सरूवा भईरहने प्रवृत्तिलाई देखाउनुभयो,‘एउटै विषयको शिक्षक पटक पटक सरूवा भईरहेको छ ।’ यसपछि, मैले शुन्य नतीजाको कुरामाथि उहाँको विचार जान्न खोजेँ, उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष शुन्य नतीजा प्राप्त भएको थियो तर यस वर्ष केही सुधार भएको छ ।’
यसको अर्थ अँझै पनि मा.विको नतीजा लाजमर्दाे नै छ । कुराकानीका सिलसिलामा उहाँले भन्नुभयो, ‘म विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर आएको चार वर्ष भयो र दुई वर्षदेखि विज्ञान विषयको शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ ।’ पहिलो एक वर्ष चुनावी सरगर्मीका कारण शिक्षक दरबन्दीप्रति कसैको चासो रहेन । त्यसपछि, विज्ञापन खोलियो तर आवेदन दिन कोहि आएन । एक जना बल्ल बल्ल आएका रहेछन् तर उनी पनि नियुक्ति लिन फर्केर आएनन् ।
प्रधानाध्यापक पण्डित भन्छन्, ‘अहिले बाहिरबाट सरूवा मिलाएर ल्याउन खोजीरहेका छौँ तर राजनीतिक कारणले अलिक मिलीराखेको छैन ।’ कस्तो राजनीतिक कारण भनी मैले सोधेको प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिनुभयो, ‘स्थानीय स्तरमा त सहयोग मिलीराखेकै छ तर जहाँबाट सरुवा गराएर ल्याउन खोजीएको हो; त्यहाँबाट चाहिँ राजनीतिक कारणले ल्याउन सकिरहेका छैनौँ ।’
उच्च मा.विको मात्रै होईन; मा.विको पनि शैक्षिक स्तर खस्किसकेको रहेछ । प्रधानाध्यापक पण्डितले बताए, विज्ञान विषयमा एउटा र अंग्रेजी विषयमा दुईवटा दरबन्दी खाली छ । प्राविधिक विषयकै शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनु स्वभाविक नै हो । यसलाई सुधार गर्ने कसरी ? षडानन्द उच्च मा.विमा शुल्क कम रहेको तथा नमुना विद्यालय भएकै कारण अरुणको शैक्षिक स्तर खस्कियो भन्नु आप्mनो कमजोरी लुकाउने असफल प्रयास मात्रै हो । षडानन्दलाई नमुना विद्यालय बनाएकै कारण विद्यार्थी भर्ना कम भएको विषयमा सहमत हुन सकिन्छ । तर, जो विद्यार्थीहरु अरुणमा भर्ना भएका थिए; उनीहरुले राम्रो नतीजा ल्याउनुपर्ने थियो नि, हैन र ! अहिले स्थानीय सरकार छ ।
नगरपालिकाहरुमा नगरप्रमुखको रुपमा मेयर पदासीन छन् । तसर्थ, मेयरले पनि आप्mनो क्षेत्रमा कुन विद्यालयको शैक्षिक स्तर कस्तो छ ? शिक्षक दरबन्दी पूर्ण छ वा छैन ? दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूसँग योग्यता छ वा छैन ? जस्ता विषयमा गम्भीर भएर अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर यस्तो पनि हुन सकेको छैन ।
वडाध्यक्ष अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू समेत यस विषयमा संवेदनशील हुन नसक्नु दुखको कुरो हो । शिक्षाप्रति स्थानीय पदाधिकारी तथा विद्यालय प्रमुखको यस प्रकारको लापरवाहीले भोजपुर जिल्लालाई मात्रै होईन; भविष्यमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माणलाई पनि प्रभावित पार्नेछ ।
प्रकाशित ३ भाद्र २0७५ , आइतबार | 2018-08-19 05:34:41